म ‘कोरोना युद्ध’ लड्ने सिपाहीहरुको उपचार गर्ने फ्लोरेन्स मंगलवार, श्रावण २७, २०७७
म ‘कोरोना’को ड्राईभर आइतवार, श्रावण २५, २०७७
कोरोना भाइरससँगभन्दा बढी समाजका केही व्यक्तिसँग लड्नुपर्‍यो बिहिवार, श्रावण २२, २०७७
लकडाउन डायरी एक दिन म भित्र बसिरहेकी थिएँ। बच्चाहरु बाहिर खेलिरहेका थिए। बच्चाहरु मेरो कोठाको बाहिर बसेर कुरा गरे। एक जनाले भन्यो- यहाँ को बस्छ र ? अर्कोले भन्यो- यहाँ त कोरोनाको मान्छे बस्छ। उनीहरुको कुरा सुनेर यस्तो भएँ कि रोउँ कि हासुँ। म संक्रमित थिइन यसैले मलाई डर थिएन। तर उनीहरु मलाई संक्रमितजसरी पो भने। अरुबेला भएको भए म सामान्य रुपमा लिएर हाँसीदिन्थेँ होला। तर त्यसरी बन्द कोठाभित्र बसेको म के गरुँ। मंगलवार, श्रावण २०, २०७७
आइसोलेशन बसुन्जेल मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, घर आएपछि बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो बाहिर ठीकठाक छु तर, मनभित्र भूकम्प जान थाल्यो। रिपोर्ट नआउदासम्म ठीकठाक भएको म रिपोर्ट पोजेटिभ आएलगत्तै ‘मनको’ बिरामी जस्तै महशुस हुन थाल्यो। एक मनले त मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो पनि भन्यो। सोमवार, श्रावण १९, २०७७
कसैले डाक्टरलाई घरबाट निकाले, कोही भागाभाग गरे, तरपनि हामी आत्तिएनौं अरु बेला डाक्टर सा’ब नमस्कार भन्ने आफ्नै टोलका मान्छेले बच्चाहरुलाई भित्र पठाएर झ्यापझुप ढोका लगाएछन्। कोरोना अस्पतालबाट आएको भनेपछि देख्ने बित्तिकै गल्लीबाट भागाभाग हुने अवस्था थियो। आफ्नो परिवारले नछोइकन दुरी कायम गरेर खानेकुरा पुर्‍याइदिन्छु भन्दा पनि त्यस्तो भयो भनेर ती चिकित्सक साथीले मलाई अनुभव सुनाउनुभएको थियो। मान्छेहरुले डाक्टरलाई देख्दा नै कोरोना भाईरस सर्छ जस्तो गरे। आइतवार, श्रावण १८, २०७७
पहिलो कोरोना संक्रमित मर्चवारका कन्हैयाको बुकुरोमा ‘मेरो नाम कृष्ण भएपनि गाउँमा आजसम्म कसैले त्यो नामले बोलाएको छैन, सबैले कन्हैया नै भन्छन्, आमाले सानो छँदा कन्हैया भनेर बोलाउने भएकाले गाउँलेहरुले सिको गरेका रहेछन्, आमाले राखिदिएको नाम भएर होला कृष्ण भन्दा कन्हैयासँग नै म धेरै जोडिएको छु’–उनले भने। शनिवार, श्रावण १७, २०७७
सुरक्षित हुनुस् भनेर क्‍वारेन्टिनमा राख्दा मेरै किरिया गरेको भन्नथाले लकडाउन भएकै अर्को दिन भारतबाट मान्छे आउन थाले। भारतमा संक्रमण बढेकाले त्यहाँबाट आउनेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो। छुन नहुने, हेर्नै नहुने मान्छे सरह व्यवहार गर्थे। शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
म मेरो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता गर्नुबाहेक केही गर्न सक्दिनथेँ हामीलाई लागेको थियो कि यत्रो ठूलो एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहरमा दुई–चार दर्जन घटनाको कुनै महत्त्व रहने छैन। फेरि स्थानीय खबरले यो महामारी “रोकथाम गर्न सकिने प्रकारको छ र यो मानिसबाट मानिसमा सर्दैन” भनेकाले पनि हामी ढुक्क थियौँ । त्यसैले यसप्रति यति धेरै आत्तिइहालेको र यसतर्फ पूरै ध्यान दिइएको थिएन। यसो त यो महामारीको उद्गम स्थल मानिएको ख्हवानान सी फुड होलसेल बजार मेरो घरबाट नजिकै केवल ६ किलोमिटर वा मोटरमा ६ मिनेटको बाटो पर नै पर्थ्यो। तर पनि सबै कुरा सामान्य नै चलिरहेको थियो। बिहिवार, श्रावण १५, २०७७
कोरोनाको मुहानदेखि बुटवलसम्म : खानेकुरा सिद्धिएर गुन्द्रुकले छाक टार्‍यौं चीनको हामी बसेको ठाउँमा यो वर्ष जाडोमा एकदम धेरै हिउँ परेको थियो। हामीहरु बाक्लो बाक्लो जाकेट लगाएर निस्कियौं। एक दिन अगाडि नेपाली राजदुतावासको मान्छेले हामीलाई एउटा सूचना दिएका थिए। ‘युरोपको एक देशले चीनबाट आफ्ना नागरिक लैजादा एक जनाको बाक्लो जाकेट लगाएको हुँदा ज्वरो नआएपनि तापक्रम धेरै देखिएको थियो। त्यसैले उसलाई जान दिइएको थिएन। तपाईहरुले त्यो समयको लागि धेरै बाक्लो कपडा लगाएर नआउनु’–सूचनामा भनेका थिए। बुधवार, श्रावण १४, २०७७
ज्यानै जानसक्ने जोखिम थियो, तर आफ्नोभन्दा संक्रमितको ज्यान जोगाउन खटियौं रुपन्देहीका अस्पताल, स्थानीय सरकार र जिल्लाका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बस्यो, जस्मा हाम्रो अस्पतालमा २४ घण्टाभित्र २ वटा आइशोलेशन बेड तयार गर्नु पर्ने निश्कर्ष निस्कियो। त्यसअनुसारले काम अघि बढायौं। मंगलवार, श्रावण १३, २०७७
कोरोना संक्रमितको लकडाउन यात्रा : दिल्ली टु कोटहीमाई मलाई बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगियो। त्यहाँ एउटा एक्सरे गरियो। पीपीई लगाएकी नर्शले थप जाँचको लागि भन्दै एक सुई रगत पनि लिइन्। त्यहाँबाट मलाई धागो कारखानामा रहेको आईसोलेसन अस्पतालमा लिएर गइयो। सुरुमै डा. सुदर्शन थापा भेट्न आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘बाबु अब तिमी यहीँ बस्छौं। तिम्रो औषधी यहीँ हुन्छ। हामीले निको बनाएरै पठाउँछौं।’ मलाई रहस्यमा राखेकोमा झनक्क रिस उठ्यो। सोमवार, श्रावण १२, २०७७
पहिलो कोरोना संक्रमितलाई खुशी पार्न अनेक उपाय खोज्यौं कोरोना अस्पतालमा पहिलो संक्रमित लगभग एक हप्ता एक्लै रहनुभयो। एकातर्फ हामीले परामर्श गर्यौ अर्कोतर्फ पोशिलो खानेकुरा सबै दिएका थियौं। उहाँ के गर्दा खुशी हुनुहुन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिन्थ्यौं। के गरेर खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा लाग्यौं। आइतवार, श्रावण ११, २०७७
समाज र कोरोना दुवैसँग लड्नुपर्‍यो गाउँदेखि सदरमुकाम तम्घाससम्म भुपालले १० देखि १५ हजारलाई संक्रमित बनायो भनेर हल्ला चल्यो। बुद्धिजिवी र नेताले समेत मलाई गाउँमै बस्यो भनेर आलोचना गरे। पसलमा सामान किन्न गएँ। परैबाट सामान फाल्दिए। शुक्रवार, श्रावण ९, २०७७
म अझै मर्न तयार भएकी छैन नितान्त व्यक्तिगत हुनु नै डायरीको प्रकृति हो। डायरी अंतरङ्गका सो‌च र आफ्नो परिवेशको चिन्ता अभिव्यक्त गरी अभिलेख राख्ने ठाउँ हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, डायरी हाम्रो मनोदशाको झलक हो। बिहिवार, श्रावण ८, २०७७
ठाउँ नपुगेर कुखुरा फर्मलाई क्‍वारेन्टिन बनाइयो, व्यवस्थित गर्दागर्दै सरेछ कोरोना भाइरस क्वारेन्टिनहरु व्यवस्थित गर्न लागिरहेको थिएँ, व्यवस्थापन गर्दैगर्दा म कुनै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा गएको हुनसक्छु भन्ने लाग्यो। कताकता डर लागिरहेको थियो। यो रोगबाट सामान्यतया मरिदैन भन्ने कुरा समाचारहरु हेरेर, विज्ञहरुका कुरा सुनेर थाहा पाएको थिएँ। मेरो रिपोर्ट पोजेटिभ आएपनि मलाई कुनै असहज महसुस भएको थिएन। मलाई रुघा, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र अरु कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएका थिएनन्। म सामान्य अवस्थामै थिएँ। बुधवार, श्रावण ७, २०७७
कोरोना कथा : सोंचेझैं जिन्दगी रैनछ यो कोरोना कहरको कालखण्ड, यही कालखण्डले दिएका अनौठा अनुभूति, पीडा, व्यथा, दुःख, कहर, त्रासका कथालाई भने कतै कुनामा लुकाएर राख्नुछ। लेख्नुछ,–कोरोना कथा। दिनुछ, आगामी पुस्तालाई हाम्रो पूस्ताले भोगेका कथाव्यथा समेटिएको–मायाको चिनो। बुधवार, श्रावण ७, २०७७